Iqela labo babanjiweyo eHermanus bavele kwinkundla yamatyala – Elitsha
Iqela labo babanjiweyo eHermanus bavele kwinkundla yamatyala
13th April 2018 Phinda KulaIyavela, Oorhulemente basemakhaya 0 Xhosa
Amakhulu abaqhanqalazi besiya kwinkundla kaMantyi emeveni kokumiswa kwesicelo sebheyile kwabo babanjiweyo. Umfanekiso ngoka Ashraf Hendricks
Livele kwinkundla kaMantyi elinye iqela kwabo bangamashumi amathandathu anethoba ababanjwayo emveni koqhanqalazo lwezindlu nomhlaba kwidolophu yase Hermanus eNtshona-Koloni.
Simiselwe umhla weshumi kwinyanga ezayo isicelo sebheyile kwityala labo batyholwa ngokudala udushe esidlangalaleni kwilokishi yase Zwelihle eHermanus kude kufuphi naseKapa. Abatyholwa abalishumi elinaye, isixhenxe ingamadoda bebevele phambi kwenkundla kamantyi eHermanus nalapho bakhululwe ngebheyile yamakhulu amathathu erandi umntu ngamnye logama abasetyhini abane bekhululwe ngokutyityimbiselwa umnwe.
Oku kulandela emva kokubanjwa kwabatyholwa abangamashumi amathandathu anethoba ngethuba abahlali kulalokishi baphuma ngendlu bezama ukuthatha umhlaba kwintsuku ezingaphambi kwePasika.
Abahlali babekhalazela indawo abahlala kuzo nanjengoko ininzi lwabo luhlala ngemva kumakhaya abantu bekwagqushalazela nezindlu ezincinane abanye bokhelwa zona. Abatyholwa abasayi kuvela ngexeshanye enkundleni nanjengoko inani labo lilikhulu.
Ukungakhululwa kwabo kubangele inkxalabo kwintsapho zabo nanjengoko bambi kubo ingabantwana besikolo logama abanye ingabasebenzi.
“Abona bantu bazithathele ukutya kwivenkile zabemi bangaphandle bangqiyame ngako ezindlini”. Oku kudizwe yinkosikazi exhelekileyo emphefumlweni unkosikazi Bukiwe Mlindelwa onamashumi amathathu anesine ubudala. Uthi unyana wakhe oneshumi elinesibhozo lweminyaka ubudala wabanjwa yaye oko kubangele ukuba asilele kwizifundo zakhe zebanga lesibhozo kwisikolo samabanga aphakamileyo Iqhayiya. Lenkosikazi idiza ukuba nangona ingenamkhanyelela unyana wayo kodwa wabanjwa ephuma endlini enkulu esiya kulala kwigumbi lakhe elingaphandle.
Ukuthatha ixesha lokuhlala eziseleni kwabatyholwa kulandela emva kwengxelo zokuba badlulisela emapoliseni amagama angengawo awabo okwenene.
Kwizinto ezathi zantunyekwa ngomlilo kuquka ithala lencwadi, isikhululo sethutyana wamapolisa, isithuthi senkonzo zonyanzeliso mthetho kwanokonakaliswa kusophulwa amacango nefesitile kwezindlu ebezisakhiwa.
Ivakalise uchulumanco inkokheli yabahlali obefudula enguceba uSicelo Gxamesi ngelithi bayakuvuyela ukukhululwa kwabatyholwa kuba bambi kubo ngabafundi logama abanye bezintsika ezondla iintsapho zabo. Uthi bazakuquqa enkundleni kuba bakho abazakuvela kwakho enkundleni ngomhla weshumi elinesibhozo. Loka Gxamesi wayenguceba wombutho ka Khongolose kwiwadi yesihlanu.
Ngethuba etyelele umamndla wase Hermanus, umphathiswa wokuhlaliswa koluntu eNtshona-Koloni uBonginkosi Madikizela wadiza ukuba umasipala weOverstrand sele ebekele bucala umhlaba ukulungiselela uluntu.
Also read: Urhulumente udilize izindlu kwindawo yogobityholo
Ukuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo
Umpathiswa wamapolisa uthi ufuna ukulwa ulwaphulo-mthetho eKapa
Umlilo obulale abasibhozo kukrokrelwa uku uqalwe ngamabom
Archives Select Month September 2019 (2) August 2019 (3) April 2019 (1) September 2018 (1) July 2018 (1) May 2018 (5) April 2018 (3) March 2018 (1) February 2018 (1) January 2018 (2) December 2017 (3) November 2017 (2) October 2017 (4) September 2017 (4) August 2017 (4) July 2017 (4) June 2017 (5) May 2017 (3) April 2017 (4) December 2016 (2) November 2016 (4) October 2016 (3) September 2016 (3) August 2016 (4) July 2016 (3) June 2016 (4) June 2014 (3)
Categories Select Category Editions (28) Edition 10 (2) Edition 11 (2) Edition 12 (2) Edition 13 (1) Edition 14 (4) Edition 6 (4) Edition 7 (3) Edition 8 (4) Edition 9 (4) Trial edition 2 (2) Elitsha newspaper (2) Ezasemisebenzini (8) Ezemfundo (12) Ezemidlalo (2) Ezempilo (4) Iyavela (50) Iziphaluka (51) Cape Town (40) East London (11) Oorhulemente basemakhaya (20) Uncategorised (30)
Learners demand toilets and water for Limpopo schools
Steep bus fare hike stops some Zimbabweans in PE going home